HERINANDRO MASINA 2017: Talata 11/04/2017 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
NDAO HANARAKA NY DIAN’I JESOSY ISIKA (TALATA)
Anio dia hanaraka an’i Jesosy ao amin’ny Tempoly tao Jerosalema isika ary rehefa avy eo ho eny amin’ny Tendrombohitra Oliva.
Ny talata maraina dia niverina tany Jerosalema indray i Jesosy sy ny mpianany. Nandalo ilay aviavy Izy sy ny mpianany ary nampianatra azy ireo mikasika ny finoana Izy. Rehefa tonga tao amin’ny Tempoly Izy dia nanao izay hamandrihana Azy ireo mpitondra ara-pivavahana mba hahazoany hisambotra Azy. Tsy nahita fomba nanaovana izany anefa izy ireo ary nanambara teny fitsarana mafy ho azy ireo Jesosy ka niteny hoe (raha fintinina):
“Ry mpitarika jamba! tantavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva…Ry bibilava, taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin’ny helo? (Mat 23:33)
Notondroin’i Jesosy mivantana ny toetran’ireo mpitari-pivavahana dia ny Fariseo sy ny Sadoseo sy ny hafa izay feno fihatsaram-belatsihy. Mitandrina ireo zavatra kely izy ireo nefa ny tena zavatra mahavery mandrakizay notsinontsiniaviny; sady manary ny tenany no manary ireo mihaino sy manaraka azy izy ireo. Tena taranaky ny menarana ilay mpamadika sy lohan’ny fahotana sy ny fahaverezana. Lozan’ireo mpitarika jamba, mba mampianatra ihany nefa hay jamba sy miraparapa mankany amin’ny fahaverezana ary Ilay mitondra famonjena ho azy mihitsy no halany sy kendreny ho vonoina, indrisy!
Ho antsika nantsoina hiandry ny ondrin’i Jesosy, ry kristiana, ry katekista, ry mpiandry ry pastora namana rehetra mba mandini-tena ve isika amin’izay ampianarintsika sy ny fomba itondrantsika tena? Manome voninahitra an’Andriamanitra ve aho sa manamavo ny anarany amin’ny alalan’ny fitondrantena, itenanana ratsy an’Andriamanitra ny toetrako sy izay ataoko? Tsy mitondra olona mankany an-danitra fa mampiahaka. Mba mampianatra ihany, manamarin-tena ho mahay teolojia sy soratra masina nefa tena jamba eo anatrehan’ny fahamarinana, hafa izay ampianarina nefa hafa izay atao. Tandremo ny fampianarana ataonao, aza safosafoina amin’izay mahametimety sy itiavan’ny olona anao fa lazao izay marina sy mahavonjy ny fanahin’ny olona. Indrisy mahamenatra, Jesosy ô, miantrà ka mamindrà fo aminay fa jamba izahay, vonjeo izahay!
Ny tolak’andron’ny talata dia nandao ny tanàna i Jesosy sy ny mpianany ka niakatra nankeny amin’ny tendrombohitra Oliva. Teo no nilazan’i Jesosy tamin’ny mpianany ny haharavan’i Jerosalema sy ny Tempoly. Horavàna satria tsy nandray Ilay Mpamonjy, nandà ny Mpanavotra, faharavana mahatsiravina no hiandry azy. Nolazainy tamin’ny mpianany fa hiverina indray ny Zanak’olona amin’ny fotoana izay tsy misy hahafantatra na dia Izy Zanaka aza. Ny Ray ihany no hahalala izany fotoana izany. Nanome famantarana maro Izy izay marika ahafantarana izany fotoana izany toy ny ady, loza ara-boajanahary.
Io andro talata io ihany koa no nifanarahan’i Jodasy Iskariota tamin’ny Synedriona mba hamadihana an’i Jesosy (Mat 26:14-16). Iray tamin’ireo mpianatr’i Jesosy i Jodasy. Ny anarany hoe Jodasy dia midika hoe “fideran’Andriamanitra” nefa tena lasa “fideran’i Satana” sy mpamadika satria nahavita nanolotra ny Mpamonjy hohelohina.
Ho avy i Jesosy, hiverina amim-boninahitra avy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Tsy misy mahalala izany fotoana izany, mazava fa ny kajikajy rehetra ataon’ny olombelona dia sain’olombelona fa tsy mitombina mihitsy, tsy misy mahalala afa tsy ny Ray ihany. Ny famantarana kosa dia hitantsika isan’andro, ady, vonoan’olona, loza ara-boajanahary, mifohaza efa mby akaiky ny fiverenany, vonona ve ianao hitsena Azy!
Tadidio fa tsy mba lavitra ny mpamadika, fa ao amin’ireo milaza azy ho mpanara-dia an’i Jesosy, ao am-piangonana. Mahalasa babo ny fiangonana maro ankehitriny ny fitiavam-boninahitra sy ny fitiavam-bola. Tsy hanolotra an’i Jesosy intsony isika fa mbola manohy mamadika Azy amin’ny alalan’ny fomba maro ary mety manafintohina sy mahalavo olona maro noho ny ataontsika. Mbola mamadika Azy ihany isika raha tsy mahajoro ho vavolombelon’ny fahamasinany eo anatrehan’ny hafa satria menatra ny ho mpianany. Mbola mamadika ihany isika raha ny tombontsoa manokana no anompoana an’Andriamanitra fa tsy ny fitiavana Azy.
Taorian’izany andro navesatra izany dia niverina tany Betania indray i Jesosy sy ny mpianany ny ariva.
Mat 21:23–24:51, Mar 11:20–13:37, Lio 20:1–21:36, Jao 12:20–38.